‘छोरीलाई दाइजो होइन, अंश दिनुहोस्’
पछिल्लो समयमा प्रदेश २ मा महिला हिंसा, घरेलु हिंसालगायतका घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले यस्ता घटना रोक्न के कस्ता योजना बनाएको छ ? के कस्ता कार्य गरेको छ ? यी विषयमा केन्द्रित भई प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवसँग शिलापत्रका लागि सुजीतकुमार झाले गरेको कुराकानी ।
प्रदेश २ मा बढ्दो महिला हिंसाका घटनालाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
प्रदेश २ को हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँ पहिलाभन्दा महिला हिंसाका घटना घटेको छ । पहिलेभन्दा अहिले सुधार आए पनि केही गम्भीर प्रकृतिका घटना घटेका छन् । यसका लागि हामी चिन्तित पनि छौं । जुन रुपमा महिलाले यस्ता घटनाबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्ने हो र उनीहरुलाई विकासको मूलधारमा ल्याइनुपर्ने त्यतातर्फ हामी अब नीतिगत रुपमा काम गर्नेछौं । हामीले महिला हिंसाका घटनालाई शून्य सहनशीलताका रुपमा लिएका छौं ।
प्रदेशमा कस्तो प्रकृतिका महिला हिंसाका घटना बढेका छन् ?
प्रदेश २ मा घट्ने अधिकांश महिला हिंसाका घटना घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै, बलात्कारका घटना पनि छन् । यसका कारण पनि हामीले खोतलेका छौं । हाम्रो केही परम्परागत विकृतहरुका कारण यस्ता घटना घट्ने गरेको पत्ता लगायौं । अर्को कारकतत्त्व महिलाहरु शिक्षित नहुनु पनि हो । प्रदेशमा ३० प्रतिशत महिला मात्रै साक्षर छन् । प्रदेशमा दलित, मुस्लिम र जनजातिको जनसंख्या ४० प्रतिशत छ । जसमा महिलाहरुको साक्षरता २ प्रतिशत मात्रै छ । पुरुषले अत्यधिक मात्रामा लागूऔषध सेवन गरेका कारण पनि महिला हिंसाका घटना बढिरहेको हामीले पाएका छौं । इन्सेकको तथ्यांकले पनि प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम महिला हिंसाको घटना घटेको देखाएको छ ।
तथ्यांकअनुसार महिला हिंसाको अवस्था कस्तो छ ?
इन्सेकको तथ्यांकलाई आधार मानेर कुरा गर्ने हो भने गत वर्ष प्रदेश २ मा ६ सय १ घटना घटेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ को अवस्था नराम्रो नै छैन । तर, म यसबाट सन्तुष्ट छैन । घटना नै नहोस् भनेर हामी गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेका छौं ।
यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न के के आधार तयार पार्नुभएको छ ?
महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न हामीले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । कार्यक्रमअन्तर्गत हामीले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान चलाएका छौं । महिला सुरक्षा सम्बन्धी एप्स बनाउँदै छौं । किशोरीहरुलाई आत्मरक्षाको तालिम दिन थालेका छौं । लागूऔषध नियन्त्रणका लागि ठोस कानूनहरु पनि निर्माण गरिरहेका छौं ।
अशिक्षाका कारण यस्ता घटना घटिरहेको छ भन्नुभयो तर शिक्षित व्यक्ति पनि यस्ता घटनामा संलग्न रहेको पाइएको छ नि ?
मैले अगाडि नै भनें, यसको मूल कारण हाम्रो सामाजिक कुरीति पनि हो । यसलाई तोड्नुपर्छ । यसका साथै म अभिभावकलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने छोरीलाई बिहे गर्दा दहेज (दाइजो) नदिनुहोस् । छोरी पनि सन्तान नै हुन् त्यसैले उनीहरुलाई पनि अंश नै दिनुपर्छ । बरु राम्रो शिक्षा दिनुहोस् ।
छोरीलाई अंश दिलाउन कानून निर्माण गर्नुहुन्छ कि अभियान चलाउनुहुन्छ ?
कानून त छ तर यस विषयमा धेरैलाई अहिले पनि जानकारी नै छैन । कानून पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कानून कार्यान्वयन गराउन हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रम नै चलाउँछौं ।
प्रदेश सरकारको अधीनमा प्रहरी नरहेको अवस्थामा कानूनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
प्रदेश मातहत प्रहरी नहुँदा हामीलाई समस्या भएकै हो । तर, प्रदेशमा महिला हिंसाका घटना कसरी घटे, प्रश्न हुन सक्छ । यो किन सम्भव भयो भने जहाँ जहाँ घटनाहरु घटे, म आफंै त्यहाँ पुगेर घटनाको विषयमा जानकारी लिएर समन्वय गर्ने गरेको छु । दोषी पक्राउ परे कि परेनन ? परे भने कारबाही अगाडि बढ्यो कि बढेन ? कारबाही किन हुन सकेन ? यस्ता विषयमा जानकारी लिने गरेको छु । जसको प्रतिफल नै महिला हिंसाका घटना घटेका छन् । र, सबै दोषी पक्राउ परिसकेका छन्, एकाध घटनाबाहेक । दण्डहीनता घटेको छ त्यसैले सुधार आएको छ ।
महिलालाई जिस्काउने घटनाहरु पनि बढेका छन्, यतातर्फ पनि केही सोच्नुभएको छ कि ?
हामीकहाँ यस विषयमा जानकारी आएको छ । ठाउँठाउँमा प्रहरी परिचालन गरेर त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही पनि गरिएको छ । २०/२५ जना त्यस्ता व्यक्तिलाई थुनामा राखेका छौं । यद्यपि, यसलाई नियन्त्रणका लागि हामी पहल गरिरहेका छौं । किशोरीहरु विद्यालय र क्याम्पस जाने बेलामा प्रहरी निगरानी बढाउन थालिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २५, २०७६, ०१:२२:००